PressReader - Isolezwe: 2018-06-15 - Babhikishele amaholo nebhonasi
Babhikishele amaholo nebhonasi
Isolezwe - 2018-06-15 - IZINDABA - KWANDOKUHLE NJOLI
BAVUKE umbhejazane basabisa ngokumisa yonke into abasebenzi bakwa-Eskom uma umqashi engazilaleli izikhalo zabo zokunyuswa kwamaholo nokukhipha imali yebhonasi.
Abasebenzi babhikishe ngaphandle kwamahhovisi akwa-Eskom, eWestville naseNew Germany bekhala ngokuthi umqashi akafuni ukukhuphula umholo nokukhipha amabhonasi ajwayele ukuphuma minyaka yonke njalo ngoJulayi.
Bebephethe izingqwembe ezithi “Sifela ubala”, “Phansi ngo-0% increase phansi.”
UMnuz Phakama Kheswa weNational Union of Metal Workers South Africa (Numsa) uthe u-Eskom ugcwele inkohlakalo enkulu, lesi ngesinye sezizathu ezibenza bangafuni ukukhuphula amaholo abasebenzi.
“Izikhulu zakwa-Eskom zigcwele inkohlakalo, badla imali yabasebenzi bajike bangasiholeli. Sizwa ngamahemuhemu ukuthi ngeke size siwathole amabhonasi ngoJulayi. Njalo ngonyaka njengabasenzi sithola ibhonasi uma siphothule umthamo esibekelwe wona womsebenzi saze sawudlula kodwa uma sekufika isikhathi samabhonasi umqashi akasasiniki.”
UNobhala weSouth African Federation of Trade Unions (Saftu) KwaZulu-Natal, uMnuz Moses Mautsoe Totetsi, uthe umqashi ukhombise enkulu inkani, usesuse impi kubo bonke abasebenzi baseNingizimu Afrika.
“U-Eskom usicasule bonke abasebenzi ngale nhlekisa yokuthi uzonyusa amaholo ngo-0%, u-0% akusikhona ukukhuphula iholo lokho. Umqashi uthuka abasebenzi uma ethi amaholo uzowanyusa ngo-0%. Izikhulu zakwaEskom kade zintshontsha imali. Kukhuphuke iVAT, uphethroli nentela kashukela kodwa umqashi akafuni ukukhuphula imali yabasebenzi,” kusho uTotetsi.
Uthe nokungabaniki abasebenzi amabhonasi abo kukhombisa enkulu inkani njengoba befinyelele emthameni womsebenzi abebebekelwe wona kodwa sengathi ngeke abakhokhele amabhonasi kulo nyaka.
Omunye wabasebenzi ongathandanga ukudalulwa ukhala ngokuthi yonke into iyanyuka. Uthe kunyuka uphethroli nokudla, banezingane ezithembele kubona.
“Uphethroli usanda kunyuka kwanyuka neVAT nokudla. Siphinde sondle nezingane zethu futhi nebhonasi yokuthi umuntu usebenze kangakanani asiyitholi,” kusho uTotetsi.
U-Eskom uthumele isitatimende kwabezindaba uxwayisa ngokuthi ngenxa yalo mbhikisho kukhona imigwaqo evaliwe, kwahlaselwa abasebenzi kwacekelwa phansi nengqalasizinda. Kulesi sitatimende u-Eskom uveze ukuthi umise ukuhanjiswa kwamalahle ngenxa yokubona ukuthi abasebenzi abaphephile ngoba ukuphepha kwabasebenzi kubalulekile.
Iziteshi ezikhahlamezeke kakhulu yiseHendrina, Camden, Hendal nase-Arnot.
ABASEBENZI bakwa-Eskom bavale amasango eNew Germany kwanganyakaza lutho bebhikishela amaholo nebhonasi